KPAL ibhizimusi repamusoro-soro rakakumikidzwa kune iyo R&D, kugadzirwa, kutengesa uye masevhisi masevhisi emhando yepamusoro-inoshanda anoshanda mafirimu. Kambani iri vakapakata yemhando kupinza kugadzirwa michina uye oga R & D uye kugadzirwa chikwata. Iyo ine yayo fekitori muChina, uye inogadzira akati wandei emafirimu nekutenga eAmerica mbishi zvigadzirwa uye zvinonamira. Zvigadzirwa zveKPAL zvakagadzirwa neyakaunganidzwa yekugadzira system uye yepamusoro R&D system. KPAL's yega tekinoroji inogona kuvhara TPU resin kuumbiridza, TPU firimu inogadzira uye kemikari inogadzira uye chaiyo yekupfeka.
PPF Production Process
Kugamuchirwa Kwezvinhu Zvakasikwa
Chinyorwa: firimu yepakutanga, ramba firimu
Makemikari: pamusoro unhani, guruu
Yepamberi Firimu Kufambiswa
Kemikari kurapwa: silane coupling mumiriri
Kurapwa kwepanyama: corona
Pamusoro peiyo yakadzika yepasi firimu
Chidimbu chakabatanidzwa Firimu / Kupisa Kwekupisa
Inonamira firimu inoendeswa kune TPU firimu
Sunungura iyo yekutanga firimu
American yepakutanga firimu: rimwe-mativi ekudzivirira firimu
ChiJapan chikuru firimu: kaviri inodzivirira firimu
Anilox roller kupfeka
Kuomesa Cylinder Pre-Kuomesa
Temperature munyonga kudzora
Inodzivirira Firimu Pretreatment
Wakaumbwa PET dziviriro firimu
Misodzi vhura iyo PET inodzivirira firimu uye isa iyo PE inodzivirira firimu
Slitting / kurongedza
KPAL yakagadzira iyo indasitiri yekutanga yechiremba yekutsvagisa nekusimudzira timu yerabhoritari muChina, yakaiswa nemidziyo yepamusoro kumba nekunze. Kuti uone yakanakisa PPF yakadzikama dziviriro, yakanakisa mhiri kwemakungwa kwechiremba vaongorori vanomiririrwa naDr Qian, vakagadzira zvigadzirwa zveakasarudzika maitiro eChina nharaunda. Rabhoritari yaive nenhamba dzinoverengeka dzezvigadzirwa, yakanyora mishumo yeunyanzvi gumi neshanu, nepo ichiumba timu yeR&D ine hunyanzvi ine matarenda echiremba.
Tsanangudzo inosarudza kubudirira kana kutadza, mhando ndiyo hwaro hwechiratidzo.
Munguva yekugadzira maitiro, gara uchitarisisa mashandiro emuchina. Kana uchicheka uye kumonera mamirita gumi nemashanu apedza bhaisikopo, tarisa pamusoro peiyo firimu, uye urase zvakaremara zvigadzirwa.
Kune imwechete batch ye membrane inogadzirwa, isu tichaita murabhoritari sampuro bvunzo kuona kuti mhando yeiyo membrane haina kuchinja zvakanyanya.
Yakasarudzika katoni kurongedza inoita kuti zvinhu zvisimbe mukufamba kwekufambisa.